» नेपाल आईडल सिजन २ कसले जित्छ ?
नेपाल आईडल सिजन २ कसले जित्छ ?
३ पुष २०७५, मंगलवार १८:०१
हेटौँडा, ३ पुस । चर्चित नेपाली सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आइडल सिजन २ को फाईनल यही पुस ६ गते नेपालमै हुने भएको छ । एपी वान एचडीबाट प्रसारण हुँदै आएको नेपाल आइडलको फाईनल ललितपुरको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको मैदानमा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
आईडल बिजेताले २० लाख नगद , होन्डा डब्लुआरभी कार , एउटा एल्बम , वल्र्ड टुर वा ५० लाख नगद पाउँनेछन् । अन्तिम प्रतिष्पर्धामा जसले भोट धेरै ल्याउँछ उसलै उपाधी चुम्नेछ । यस वर्ष नेपाल आईडलको फाईनलमा पोखराका बिक्रम बराल ,झापाका सुमित पाठक , अस्मिता अधिकारी र धनगढीका रवि ओड पुगेका छन् । बिक्रम र सुमित दुबै जना गोल्डेन माईक पाएका प्रतिष्पर्धी हुन् । हेरौँ भिडियो-
फाईनल नजिकिएसँगै कसले भोट बढि ल्याउँला र कसले आईडल जित्ला भन्ने चर्चा परिचर्चा सुरु भईसकेको छ । कोही पोखराका बिक्रम बरालको पक्षमा छन् भने कोही झापाका सुमित पाठकका पक्षमा छन् । कोहीले चाहिँ यस वर्ष महिला प्रतियोगीका रुपमा झापाकी अस्मिता अधिकारीलाई जिताउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । त्यस्तै धनगढीका रबि ओडको पक्षमा पनि ठूलो जनसागर छ ।
सबैको मायाको पाएको यी ४ प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये कसले जित्लान् त नेपाल आईडल सिजन २ ? तपाईको विचारमा को होलान् त बिजेता ? आउनुस् गेस गरौँ । कसले जित्ला नेपाल आईडल सिजन २ ? भिडियोको मुनि कमेन्ट गर्नुहोस् ।